विचार/दृष्टिकोण Archives - Page 27 of 33 - Purbeli News
डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई खुल्ला पत्र
डिआईजी चन्द नमस्कार ! हुन त तपाईलाई मेरो यो खुल्ला पत्र पढ्ने समय पनि छैन होला । तपाई अहिले आईजीपी हुने दौडमा निकै ब्यस्त हुनुहुन्छ । आईजीपी चुनिने समय नजिकिदै गर्दा तपाई आफुलाई अब्वल मान्दै आफु निकट नेता तथा भारतीय अगुवालाई पनि भेटिसक्नु भयो भन्ने हल्ला अहिले बजारमा घिनलाग्दो तरीकावाट प्रचार भईरहेको छ । यदि तपाईले यो अर्कत गरेकै हो भने आम जनताल...
महिलालाई सुन्दर पुरुष खोज्ने अधिकार छैन ?
उमेर बढ्दै जादा आफन्त, नातेदार र चिनजानका मान्छेहरुको नियमित प्रश्न होस् विवाह । किन, कसरी के कारणले यी प्रश्न पनि संगै जोडिएर आउँछन् ? उनीहरु नै जानुन संगै सुझाव पनि दिन्छन –“ अव त उमेर भइसक्यो, छोरी मान्छेले ढिला गर्न हुन्न, वैलैमा नगरे उमेर वित्छ ” । नेपालमा कानुनले नै विवाहका लागि उमेरको हद २० बर्ष तोकेको छ । प्रजनन् स्वास्थ्यका दृष्टीकोणले पनि...
‘छक्कापन्जा’ मिसिएको नेपाली राजनीति
लेखक प्रदिप नेपाल लेख्छन् –‘निर्वाचन आयोगले पार्टी नै खारेज गरेको अध्यक्षलाई पनि मन्त्री बनाउन मिल्दो रहेछ ।’ ४३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पु¥याएर आफूलाई हुकुम भएको आदेश तामेल गर्न साथै नुनको साझो चिताउन अनि सत्ता खेललाई बढाउने झेल गरेकोमा नेपालको आक्रोश हो –यो । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कल, बल र छल गणीतीय हिसाबले आफ्ना पोल्टामा पार्न यतिखेर प्रचण्ड...
बालबालिकालाई नैतिक र जिम्मेवार बनाऔं
आजकालका बालबालिकालाई नैतिक शिक्षा दिइदैन । नैतिकवान बन्नु पर्छ भन्ने सोचाइ बावुआमाले बालबालिकालाई सिकाइन्छ । नैतिक शिक्षा नभएर आजकालका बालबालिकाहरुले आफ्नो अडान कायम राख्दछन् । हुनतः बालबालिका भनेका काँचो माटोको भाँडा हुन्, उनीहरुलाई जे–बनाए पनि त्यही बन्दछन् भन्ने धारणा रहिआएको छ । शिक्षाको पाठ्क्रमको संरचना पनि यिनै नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको छ...
अबसरबादले कहिल्यै इतिहास बनाउन सक्दैन ।
शनिबार, माघ ०८, २०७३
"मानिसको जिबन पनि नदी जस्तै अबिराम गतिले बगिरहनु हो । भु–बनोट भिन्नताले नदीको उर्लाहट र बेगलाई उच्छ्रिन्खल र शान्त तुल्यायजस्तै मानिसलाई पनि उमेर र परिस्थितीले कहिले उग्र अशान्त र बिद्रोही बनाउछ भने कहिले उ शान्त र संययित बन्छ । तर गतिवान रहनु उस्को अस्मिता र अस्तित्त्व हो । त्यस्को अभाबमा जिबन अर्थ हिन र निरर्थक बन्दछ ।" यी माथिका भनाइहरु नेपाल...
घरमा चर्पी किन बनाइन्छ ? सहजरुपमा उत्तर दिदा दिसा गर्नलाई चर्पी बनाइन्छ भन्ने आउँछ तर, ओखलढुंगाको सदरमुकाम भित्रै रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकाको ज्यामीरे सहित जिल्लाका खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएका अधिकांश बस्तीका नागरिकले दिसा चर्पीमा नभई बारीका पाटामा गर्छन् । घरमा चर्पी बनाएका छन तर चर्पीमा दिसा पिसाव नगरेर घरछेउको वारीमा दिसापिसाव गर्ने गरेका छन...
विचलनले भत्किदै परिवार
बुधबार, माघ ०५, २०७३
गाउँघरमा आय आर्जनका धेरै विकल्प नभएपछि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । यसले धेरैले परिवारको जीवनस्तर सुर्धेको पनि छ । तर धेरै महिलामा यही कारणले विचलन पनि ल्याएको छ । बेरोजगार भएर रोजगारी खोज्न या गाउँघरमाभन्दा राम्रो आय आर्जन गरेर जीवन यापन गर्ने उद्देश्यले युवाहरु विदेशिएका हुन् । रेमिट्यान्स गाउँको जीवनस्तर सुधार्ने अस्त्र मात्र बनेको छैन, दुरुपयोग...
पुस २७ गते २९४ औं पृथ्वी जयन्ती । पहिलेपहिले भए भोलिकै दिनलाई राष्ट्रले भव्य रूपमा ‘पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस’ का भनेर देशव्यापी तवरले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँथ्यो । वर्षको एकदिन भए पनि नेपालीले नेपाल राष्ट्रका एकीकरण कर्ताप्रति श्रद्धापूर्वक सम्झने गर्थे । गर्विलो इतिहास सुन्न पाएर गौरवान्वित हुन्थे । विडम्बना, अहिले कालबेला नै...
बिधार्थी संगठनलाई पनि किन २८ बर्षको मापदण्डमा नराख्ने ?
आज भन्दा ४ वर्ष अगाडी म स्नातोक्तर अध्ययनका लागि कलेज भर्ना गर्न पुगे , सरकारी कलेजमा भर्ना गर्न राजनैतीक संगठनको सहयोग लिए पछी सजिलो हुने ,आफ्नो निकट एक जाना साथीलाई भने अनी भर्नाको काम सिध्याए । समसामयिक राजनीतिको छलफल पछी मेरो दिमाग मा धेरै कुराहरु खेले । राजनीतिमा लागेको मेरो त्यो साथी उमेरको हिसाबले ३० बर्ष र एकाइ समिती अध्यक्ष । बिहान भनेको...
मोर्न्निङ वाक को लागी बिहानै उठेर बाहिर लागे केही समय पश्चात चिया दोकान पसेर म लगायत अरु केही साथी एउटा टेबल मा बसिउ । सामान्य गफ हुदै थियो अर्को एक समुह पनी चिया पिउन नै हुन पर्छ तेही हामी बसिरहेको नजिक को टेबल मा आएर बसे । सायद कोई राजनीति कर्मी अथवा पार्टी कार्यकर्ता हनु पर्छ । ऊनी हरू एमाले या केपी ओली का सुभ चिन्तक हुन पर्छ । उनीहरू एमाले र...